Soo Saaraha Ugu Fiican Golaha Wasiirada & Warshadda | Medo
MEDO Kabadhada Casriga ah
Kabadhada Medo waxay soo bandhigaan muuqaal casri ah oo qiimo jaban leh.
Fahmitaanka welwelka isticmaaleyaasha ugu dambeeya, kabadhada MEDO ee istaaga TV-ga waxay leeyihiin astaamo iyo dookhyo naqshad duwan; iyo sabuuradaha MEDO waxay bixiyaan keyd ku filan saxamada, qalabka qalinka, iyo dhalooyinka. Adoo adeegsanaya dharka tayada sare leh iyo qaybaha birta, oo ay weheliso habka wax soo saarka horumarsan iyo nidaamka xakamaynta tayada adag, dhammaan kuwa wax ka qabanaya suuqa aad bartilmaameedsato ee aadka loo suuq geyn karo ayaa had iyo jeer kaa caawin kara qiimahaaga astaanta.
Marble Top TV-ga golaha wasiirada
Taleefishinka casriga ah ee leh marmarka waa naqshaddii ugu dambeysay. Waxay leedahay naqshad fudud laakiin muuqaal leh. Isticmaalka lugta naxaasta ah ee lagu duuduubay maqaarka salka ee tayada sare leh waxay ku dareysaa dareen casri ah iyo xarrago muuqaalka guud, iyadoo lagu dheereynayo adkeysiga iyo xoojinta qeybaha muhiimka ah.
Qolka fadhiga ee TV-ga Alwaaxda ah
Khadadka armaajooyinka dhinacyadu waa nadiif oo hagaagsan yihiin, oo leh qurux dabiici ah. Dhadhan gaar ah, ayaa lagu waafajin karaa qalabka casriga casriga ama qaab dhaqameedka. Dharka qoryaha adag ee gacanta lagu nadiifiyo ayaa muujinaya xariifnimada faahfaahinta iyo farsamada gacanta. Maaddada waxaa sameeya Qiiqa Qiiqa iyo 304 ahama ee Titanium Plated.
Taleefishinka Leather TV ee Stylish
Golaha wasiirada TV-ga waxaa lagu gartaa isku-dhafnaan qaabab kala duwan leh. Khadadka albaabbada gadaalaha gadaal gadaal waxay isku daraan booska wareegga wareega, geesaha wareegsan iyo lugaha caatada ah, taas oo u oggolaaneysa alwaax adag iyo bir qaro weyn inay si qurux badan u wada noolaadaan.
Kabadhka Gollaha Wasakhda ee Leather Alwaax
TV-ga istaaga dhamaadka geedka geedka. Waxay leedahay lugaha birta sare leh ee birta loo adkeeyo taasoo fududeyneysa nadiifinta nolol maalmeedka. Laba shey oo qarsoon ayaa gacan ka geysanaya abaabulka fiilooyinka qeybta madadaalada si aad uga badbaadiso goobtaada nolosha qaska. Maaddaama ay tahay mid ka mid ah howlaha aasaasiga ah ee istaagga TV-ga, waxay leedahay laba khaanadood oo waaweyn oo wax lagu keydiyo halka qalabka tayada leh ee sumcadaha caanka ah loo adeegsado in lagu dheereeyo adeegga TV-ga.
Golaha Minimalist Side / Console
MEDO Side Cabinet-ka ee qaab-dhismeedka caadiga ahi waa mid ku habboon qolka cuntada. Cabbirka ku habboon, qaabka fasalka sare oo kooban, iyo sidoo kale shaqeynta keydinta ballaaran ayaa ka dhigaysa mid aan laga maarmin oo wax ku ool ah qolka cuntada.
Shaxda Qunyar-socodka Qolka Nolosha
Jadwalka 'MEDO Console' wuxuu muujinayaa quruxda farsamada gacanta marka ay isku dhacaan alaab iyo midabyo kala duwan. Looxyada waa xarkaha biraha la safeeyey; qaybaha iyo dusha sare ee golaha wasakhda ayaa ah walnut ama alwaax adag; iyo looxyada waa alwaax ama walnut veneer dhexdhexaad cufnaanta fiberboard. Albaabka sabuuradda dhexdhexaadka ah ee cirka iskaga furaya banaanka, iyo gudaha looxyada waxaa lagu qurxiyay alwaax.
Khaanad dhinac gaar ah / Sanduuqa Kabaha
Waxaa loo isticmaali karaa sida labada dhinac golaha wasiirada iyo sanduuqa kabaha. Iyada oo leh alwaax iyo maqaar isku dhafan, waxay ku siineysaa aragti cusboonaysiin gurigaaga qolka fadhiga ama albaabka laga soo galo. Waxay ku timaaddaa afar albaab oo furan iyadoo la adeegsanayo midab ka duwan taas oo ka dhigaysa mid ku wanaagsan ururinta. Kaydinta ballaaran sidoo kale waa muuqaal soo jiidasho leh, waxay ku habboon tahay qaab nololeedkaaga fudud.
Jadwalka Cunnada Casriga ah ee Casriga ah
Miiska Console waa shey shaqeynaya oo ku habboon jikada iyo qolka cuntada. Dhexdhexaadku waa tixgelin dheeri ah oo leh laba lakab oo fidinaya sanduuqa keydinta, lakabka salka ayaa ah keyd ballaaran. Isku darka jilicsan ayaa si fiican u cusbooneysiiya khibradaada nolol maalmeedka. Intaa waxaa sii dheer, iyada oo la adeegsanayo maaddada maqaarka salka iyo dusha sare ee marmar ama alwaax dusha sare, waxay ku muujin doontaa falsafadda nolosha sayidkiisa midab-dhismeedka iyo moodada.
Istaaga TV raaxada leh | Qolka fadhiga Naqshadeynta casriga casriga ah ee TV-ga | Naqshadaynta Golaha Wasiiradda ee TV-ga
Macaamiisha raadsanaya istaandarka TV-ga gaarka ah waxay leeyihiin astaamo iyo dookhyo naqshad oo kala duwan. Fahmitaanka walaacan, MEDO waxay abuureysaa istaadiis TV caadadiisu tahay oo waara oo wax ka qabta suuqa bartilmaameedkaaga.
Adiga oo adeegsanaya agab tayo sare leh, naqshadihii ugu dambeeyay, iyo soo saar khibrad leh, waxaan ka yeelnaa TV-ga caadada u ah sida aad u kala soocday. MEDO 'TV-yada aadka loo suuq geyn karo ayaa had iyo jeer kaa caawin kara inaad qiime ku darto.
Taxanaha TV-ga ee 'Living Room TV Series' waa mid ka mid ah kuwa TV-yada lagu qiimeeyo ee ugu hooseeya ee uruurinta MEDO. Waa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad suuqa. Naqshadeeye MEDO wuxuu siinayaa midab cusub oo si weyn loogu isticmaalo qalabka guryaha. Si loo daboolo baahiyaha cabirrada boosaska kala duwan, waxay sidoo kale ku dheereyn kartaa dherer iyada oo la hagaajinayo guddiga sare si loo dheereeyo ama ka gaabiyo. Waa mid la jaan qaadi kara meelaha kala duwan.
Naqshad Cusub Naqshadeynta Guryaha | Kaydinta Qalabka TV-ga Kaydinta | Golaha Wasiirrada ee Minimalist-ka casriga ah
Qaybta ugu weyni waxay ku jirtaa qaybta 'Meneered MDF' waxay ku dareysaa qaabab badan. Saldhiggu waa bir bir badan oo kaarboon ah sidaa darteed way adkaan kartaa oo isla markaa aad u dhalaali kartaa.
Iyadoo la adeegsanayo naqshad casri ah oo casri ah, waxay isku darsameysaa fudeyd iyo wada shaqeyn si aad u wanaagsan. Waxaa intaa dheer, khaanadaha waaweyn waxay bixiyaan meel weyn oo wax lagu keydiyo waxayna TV-ga ka dhigaan mid wax ku ool ah. Alwaaxda adag & maqaar sareedda leh marmarka sare waxay ka dhigeysaa mid xoogan oo xasiloon qaab dhismeedka adeegsiga aaminka iyo muddada-dheer.
Miiska qunsulka ee albaabka laga soo galo waa aragtida ugu horreysa ee alaabta guriga ku jirta. In kasta oo sida caadiga ah loo adeegsado habka soo gelida, miisaska qalabka lagu rakibo ee MEDO waxaa lagu dabaqi karaa meel kasta oo guriga ka mid ah waana mid aan dhammaad lahayn lala qabsan karo.
Miisaska kombiyuutarka ee 'MEDO Console' ayaa sidoo kale isku daraya naqshad jilicsan iyo utility. Adoo adeegsanaya mashiinka horumarsan iyo qalabka tayada leh, waa laguu xaqiijin karaa tayada miisaska qalabka wax lagu rakibo ee MEDO.
Naqshadayntu waa mid fudud oo casri ah oo ku habboon qaabab iyo meelo badan. Waxay isku daraysaa qoryaha iyo birta si aad u wanaagsan si loo soo bandhigo muuqaal casri ah. Dusha sare ayaa bixiya sanduuqyo yaryar oo loogu talagalay keydinta maqaallada yaryar ee kaa caawin kara abaabulka gelitaankaaga. Saldhiggu wuxuu ku yimaadaa tuubbo bir ah oo laba jibbaaran oo bir ah. In kasta oo ay u egtahay mid khafiif ah, way ku mahadsan tahay tayada birta wanaagsan.
Shaxda Qunyar-socodka Minimalist Tayada Sare | Kaydinta Qolka Fadhiga Kaydinta Alwaaxa Alaabada | Alaabta Golaha Wasiirada ee Hallway
Iyadoo la adeegsanayo naqshad casri ah oo casri ah, waxay isku darsameysaa fudeyd iyo wada shaqeyn si aad u wanaagsan. Qoryaha adag & maqaar dusha sare leh ee salka marmarka sare wuxuu kadhigaa mid xoogan oo xasiloon qaab dhismeedka sidaa darteed waa amaan in la isticmaalo.
Qalab Casri ah TV-ga Furniture
Istaagga TV-ga 2880x1020x750mm
Waxyaabaha: Steel, Premium maqaar Saddle, laga keeno Walnunt Veneer
Qaabka hoose Lugta Birta + Leather Saddel
Istaagga TV-ga 2170 * 420 * 680mm
Waxyaabaha: Sigaar-cabbista Veneer, 304 ahama bir Titanium
Istaagga TV-ga 2200 * 400 * 430mm
Waxyaabaha: Jir bir ah oo rinji leh, walnunt veneer laga soo dhoofiyo, maqaar salka ku haya sicirka
Qaabka hoose Lugta Birta Birta
Istaagga TV-ga 2030 * 415 * 490mm
Waxyaabaha: Premium maqaar koorsada Steel madow steel, geedkii
Golaha Side Side Furniture
Golaha Wasiirada 1380 * 380 * 1500mm
Waxyaabaha: Bir bir ah oo madow ah ， madow iyo caddaan geedka ， premium maqaarka salka ku haya
Golaha Wasiirada 1250 * 420 * 1390mm
Waxyaabaha: Premium maqaar koorsada ， 304 titanium steel ahama
Golaha Wasiirada 900 * 400 * 1080mm
Waxyaabaha: Jir rinji rinjiga ， premium maqaar koore sadd veneer laga keeno walnunt
Golaha Wasiirada 1200 * 400 * 890mm
Waxyaabaha: Steel ， Premium maqaar Saddle ， Walnunt Veneer laga keenay
Xiga: Qaar kale